‘बाहुबली-२’ आगमी वर्ष आउने, नयाँ कन्सेप्ट यस्तो छ .... - Purbeli News
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन २०, २०७३ समय: १५:२६:१३
‘कटप्पा’ले बाहुबलीलाई किन मार्यो? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजीरहेका दर्शकहरुको लागि ‘बाहुबली’को दोस्रो संस्करण आउने भएको छ। पहिलो फिल्ममै दर्शकको मन जितेर चर्चामा आएको बाहुबलीलाई फेरि फिल्मका निर्माताहरु फिल्मलाई भव्य रुपमा बनाउने तयारीमा लागिपरेका छन्। निर्माताहरुले बाहुबलीको अन्डरप्रोडक्सन भइरहेको जानकारी दिएका छन् भने दर्शकको आशातित अपेक्षालाई पूरा गर्न फिल्मको नयाँ सेट भइरहेको फिल्मका आर्ट डिरेक्टर साबू सायरिलले बता‌एका छन्। यसअघि फिल्म बाहुबलीले दक्षिण भारतीयको नयाँ परिचय बनाएको थियो।
उनका अुनसार ‘बाहुबली 2’को सेट निर्माणमा ३ सय देखि पाँच सय मानिस हुने बताइएको छ।जसमा पेन्टर्स, कारपेन्टरदेखि कन्सट्रक्शनका कामदार तथा कलाकार संलग्न हुन्छन्। साबूलाई मान्ने हो भने यो उनको जीवनकै सबैभन्दा ठूलो फिल्म हुनेछ। उनी अहिले करीब दश वटा फिल्ममा काम गरिहरेका छन्।
तर उनलाई सबैभन्दा चुनौती बाहुबली नै लागेको बताएका छन्।
‘बाहुबली-२’मा के के प्रयोग गरिएको छ?
अब बन्ने ‘बाहुबली-२’मा थ्रिडी प्रिन्टिङको प्रयोग गरिएको छ। पहिले बाहुबलीमा बारकार्बन फाइबर प्रयोग गरिएको थियो भने यसपटक हेलिकोप्टरको ब्लेड प्रयोग गरिनेछ। किनकी यो बारकार्बन फाइबरभन्दा थप केही बलियो हुन्छ।
यसका साथै इन्टिग्रेटेड रबर फोम जुन सामान्यता जिम मशिनमा प्रयोग गरिएको हुन्छ। यही तरिकाले फिल्मको लागि मात्रै यी सबै सामग्रीबाट हतियार बनाइनेछ जुन धेरै नै राम्रो हुने निर्देशक साबूले बताएका छन्।
यसैगरी चलचित्र ‘बाहुबली’ युद्धको बेलामा चेन, हेलमेट, चट्टान तथा बाउल्डर्सको प्रयोग गरिएको थियो। तर प्रभासले अघिल्लो बाहुबलीमा काँधमा बोकेको शिवलिंग पनि इन्टिग्रेटेड रबर फोमबाट बनाइएको थियो।
अर्को वर्ष सार्वजनिक हुनेछ बाहुबली २
एस एस राजामौलीको निर्देशनमा बन्ने चलचित्र ‘बाहुबली २’ आगामी वर्ष १७ अप्रिलमा सार्वजनिक हुनेछ। चलचित्रमा प्रभास, राणा दग्गुबती, अमीषा शेट्टी, राम्या कृष्णन तथा सत्याराजको मुख्य भूमिका रहनेछ।श्राेत – मिडिया एनपी